Waxaa kale oo suurtagal ah in inta waqtigaa lagu jiro in xÃ alada Itoobiya ay hagaagto oo hawshuba iska fududaato oo Mentor Abiy Ahmed uu noo soo diro ciidamadi Itoobiya iyo Eritetia Ka imaan lahaa oo dimoqraadiyada dalka Ku fidin lahaa.
Waxaan soo xasuustay sheekadii Wiil reer Xamar ahaa ayaa waagii Ololihii Gaalkacyo loo diray waxaana loo geeyey cido reer miyi ahaa. Habeenkii baadiyaha Cabsi daraadeed intuu seexan waayey ayuu Odaygii reerka kacshay Adeer Adeer Ka kac Haye adeer maxaa ku helay ? Adeer abeeso aa I cuntay nooh. Odaygii baa Yiri Maandhoow afkaba mayga qaadaa ðŸ¤£ðŸ¤£ Hade Soomaaliya mar alle iyo markii Madaxa soo taagto waxaa hela mid inkaar qabo ahoo Dictator ah sida Farmaajo oo kale ah.